Vavaka ho an'i Santa Muerte mba hieritreretany ahy. ? 24 ora
Vavaka amin'ny Fahafatesana masina hieritreretana ahy dia ny manome ny zon'ity Olomasina ity hiditra ny fifandraisantsika hanome anay ny fanampiana ilaintsika.
Tsara homarihina fa vavaka io dia tsy vitan'ny mpiara-miombon'antoka taloha fa azo atao mandrakariva mba hampazonana an'ity olona ity antsika ho ao an-tsaintsika mandritra ny fotoana rehetra.
Tena mahery ny vavaka tsy maintsy ataontsika tsara satria mahagaga ny valiny ary azo tsikaritra hatramin'ny fotoana nijanonanay ny fanaovana ny vavaka.
1 Vavaka amin'ny Fahafatesana masina hieritreretana ahy
1.1 Rahoviana aho no afaka mivavaka ny fahafatesana masina mba hieritreritra ahy?
1.2 Mandeha haingana ve ny vavaka?
1.3 Inona ary ity vavaka ity?
Very aho, tsy mikendry, tsy be herim-po ary tsy manam-pitiavana.
Very aho tsapako, fa manantena aho fa hahita ny tenako. Rehefa miantso anao aho dia mifoha indray ny finoako.
Ho avy aminao aho satria te ho sitrana aho. Nandeha tamin'ny lalana maizimaizina aho, nahita ny mpitsara ny vintana ahy.
Ireo fotoana izay nahatonga ahy ho latsaka ary na dia efa nitsangana aho izao, dia eo an-tany aho nefa tsy afaka mijanona.
Fahafatesana sambatra, mamindrà fo amiko ary mitodiha ho fanampiana ahy.
Ny fahafatesana sambatra dia mamerina ahy amin'ny toe-piainana, mamita ity olombelona izay amin'ny antsasa-misiny ity.
Isaorana, tapaho ny gadra izay mamatotra ahy ary avereno amiko ny elany izay mampanidina ahy.
Ianao irery no itokisako, aminao aho fa mivavaka ihany, fa ianao ihany no mila miverina.
Avereno aho amin'ny lalan'aina, izay ahiratan'ny masoko.
Izay mihaino ny sofiko ny sofiko ary tsapako ny fihodinan'ny rivotra izay miaraka amiko.
Avereno aho, ampodio aho fa tsy te handeha lavitra. Te hiverina amin'ny fiainana aho.
Fantatro fa mihaino ahy ianao, mifona aminao aho, manova ny fiainako, mampanantena aho (hanao fampanantenana) ho an'ity fankasitrahana ity.
Ity dia vavaka efa mikoriana avy ao am-po Imbetsaka ny olona iray tafiditra ao anatin'ny fifandraisana no mety hahatsapa fa tsy ampy ...
Tsy mandeha araka ny tokony ho izy ireo fa ny filana fanampiny dia ilaina ary izay indrindra no misy vavaka Izy io dia lasa fitaovam-piadiana mahery vaika azontsika.
Rahoviana aho no afaka mivavaka ny fahafatesana masina mba hieritreritra ahy?
Te hahafantatra ve ianao rehefa afaka mivavaka?
Isaky ny mahatsapa isika fa ilaina Azontsika atao ny milamina sy matoky azy io.
Na aiza na aiza misy antsika fa mila finoana sy avy amin’ny fanahy ihany.
Tsy maninona na amin'ny andro na ny ora. Ny zava-dehibe dia ny hananana finoana.
Mandeha haingana ve ny vavaka?
Ny vavaka dia tsy manam-potoana hamaliana azy fa tamin'ity indray mitoraka ity dia misy mpino an'arivony izay manome antoka fa voavaly ao anatin'ny fotoana fohy ny vavaka izay mampiakatra ny Fahafatesana Masina.
Izany dia afaka miankina amin'ny lafin-javatra maro toa ny finoana na ny hamafin'ny zavatra ilaina iampitana, na izany aza dia sarotra ny miantoka zavatra toy izany, ka mila mino isika fa ny asa dia voavaly amin'ny fotoana mety, tsy aloha na aorian'izay.
Ny vavaka mieritreritra ahy dia manompo manatrika ny fisainan'ny olon-kafa.
Izy io dia azo ampiasaina amin'ny toe-javatra rehetra izay mety hitranga ary na amin'ny fifandraisana aza tsy misy ifandraisany amin'ny fitiavana.
Vavaka mahery izay tsy maintsy tanterahina miaraka amin'ny andraikitra satria tsy maintsy misy tanjona na tanjona tratrarina satria tsy tokony hibodo ny sain'ny olon-kafa fotsiny isika raha tsy efa nomanina izay ho ataontsika hatao manaraka satria tena mahomby.
Mivelatra hatrany amin'ny herin'ny vavaka mankany amin'ny Fahafatesana hisaina ahy izany.
Vavaka ho an'i Santa Muerte hamerina ilay hava-malala
Fivavaky ny Fahafatesana Masina ho an'ny fitiavana tsy hay